Fikradda iskuulada Montessori iyo xanaanada caruurta Montessori
Barashada dhammaan dareennada - dareemida 1000 ee Montessori
Iskuulada Montessori iyo xanaanada caruurta ee Jarmalka
"I caawi inaan naftayda u shaqeeyo", fikradda Montessori - Waxbarashada Montessori waxay dib ugu noqotaa barbaarinta iyo dhaqtarka Maria Montessori. 1870 Tani waxay ku dhalatay dalka Talyaaniga waxana ay ka timid guri dabaq ah.
Masiixiyiintu waxbartay oo si fiican u safray, iyada oo si gaar ah loogu ballan qaaday xuquuqda haweenka iyo xuquuqda shakhsiyeed. Waxay ka shaqeysay isbitaal leh carruur maskaxiyan naafo ah, laakiin waxay ogaatay in ay aad u jecel yihiin in ay wax bartaan oo ay aqbalaan, laakiin illaa hadda uma hayo fikradda saxda ah.
Maria Montessori waxay soo saartay dareen dareen ah oo loogu talagalay carruurtaas si ay u caawiyaan caruurtu. Iyada oo ku saleysan tan, macalinka Montessori wuxuu horumariyey sanado badan. Fikradda asaasiga ah ee waxbarashadda oo dhan waa mabaadii'da hagaha ee la yaqaan: I caawi inaan naftayda sameeyo!
Maxaa ka danbeeya macalinka Montessori?
Waxbarashada Montessori waxay ilmaha u dhigtaa bartamaha waxbarashada, ilmuhu waa dhisme sare oo u gaar ah oo ujeedadiisa iyo dhiirigelinta qaabka abaalmarinta iyo ciqaabta lagama maarmaan ah. Carruurta, sida ay ku socdaan taageerayaasha Montessori, waxay jeclaan lahaayeen inay bartaan naftooda iyo inay noqdaan kuwo gudaha ku dhiirigeliya, maaddaama fikradda ah inay isku dhex galaan adduunka qaangaarka ah waa go'aan adag.
Iyadoo lagu saleynayo fikradahaasi, iskuulada Montessori waxay baraan shaqo badan oo bilaash ah iyo casharo furan. Casharradu waxay siiyaan qolka ilmaha si ay u tijaabiyaan una helaan khibrad. Ilmaha leh awoodiisa wuxuu ku jiraa qorshaha hore, wuxuu go'aaminayaa jadwalka barashada iyo horumarinta qayaxiisa. Taas beddelkeeda, waxa kaliya oo lagu faray in ay ku daydaan waxyaabaha.
Tusaale ahaan, caruurta xanaanada ee Montessori, caruurtu waxay ku dhiirigeliyaan inay miiska saaraan iyagoo daawanaya marba mar iyo marxaladda ay isku dayayaan in ay naftooda caawiyaan.
Waxbarashada Montessori waxay u qaybisaa horumarinta ilmaha saddexda marxaladood. Marxaladda ilmanimada hore (0-6 sano), marxaladda labaad ee carruurnimada (8-12 sano) iyo qaan-gaarnimada (12-18 sano). Dhammaan sadexda wejiyada dareenka ayaa kaalin muhiim ah ka ciyaara, maxaa yeelay carruurtu waxay leeyihiin rabitaan dabiiciga ah oo dhadhamiya, taabto oo uraya wax kasta.
Fahamka dareenka macnaha waa feker aasaasi ah oo ku saabsan iskuulada Montessori iyo xanaanada caruurta. Waxbarashadu waxay u fiicnaan doontaa dareennada halkii ay ka muuqan lahayd nuxurka, sidaas darteed waxbarashadu way ka fiicnaan laheed, u doodaha. Iyada oo la xoojinayo dareenka, qalabka waxbarashada gaarka ah ayaa la sameeyey. Xisaabta, tusaale ahaan, silsiladaha qoryaha ayaa loo isticmaalaa si loo dhigo lambarrada la fahmi karo, taas oo ah, la taaban karo. Gubashooyinka luulaha leh ee 1000 waxay calaamad u yihiin tirooyin badan oo u ogolaanaya cunuga inuu cabbiro qiyaaso badan - ma ahan oo kaliya madaxa, laakiin sidoo kale dareemay.
Jarmalka, agagaaraha xannaanooyinka 600 waxay shaqeeyaan sida waafaqsan fikradda Maria Montessori. Bilowga 2013 waxaa jiray dugsiyada hoose ee 225 iyo dugsiyada sare ee 156 oo raacaya mabaadiidaas. Iskuulada badankood waa kuwo gaar loo leeyahay oo waxay ku dhisaan ilmaha koritaanka bartilmaameedkooda.
Inta badan naqdiyeyaashu waxay arkayaan kala-guurka dugsiga hoose ee Montessori ilaa dugsi sare sida dhibaato. Si kastaba ha noqotee, waxaa la soo bandhigay wakhtigii hore in caruurtu aysan wax dhibaato ah ku qabin. Waxyaabaha manhajka ka kooban kama duwana kuwa dugsiga caadiga ah, laakiin jidka ayaa muhiim ah, sidee buu ilmuhu u bartaa contentkan.
Shaqo bilaash ah, xulasho lamaane ah, shaqo kooxeed, barasho furan oo leh fursado badan oo dhaqdhaqaaq ah, waqtigooda waqtigoodu waa qaar ka mid ah dhinacyada ciyaaraha iskuulka Montessori. Ugu dambeyn, ilmuhu wuxuu ka faa'iideystaa tallaabooyinkaas sababtoo ah waxay bartaa in ay si madax-bannaan u shaqeyso.